जेम्स ओभिएरा - अनियमित प्रतिभा
जेम्स ओभिएरा नाइजेरियन केन्द्रीय स्ट्राइकर हो, जो एक पटक, उनको जवानमा, विश्वको सबैभन्दा प्रतिभाशाली र प्रतिभाशाली खेलाडीमध्ये एकलाई मानिन्छ। तिनको धर्ती अविस्मरणीय थियो, उनले दुई या तीन उच्च प्रोफाइल विरोधाभास बिना धेरै मुसीबत गरे। तर दुर्भाग्यवश, उनीहरूको ताराले सताउन सकेन। यसको कारण धेरै घाइते भएका थिए, र यस्तो सख्त चीजले आलस्यताको रूपमा, जसले खेलाडीले आफैंलाई खुलासा गरेको छ। जेम्स ओभिएरा विश्वकप स्टार हुन सक्थे, तर अन्त्यमा उनले मध्यस्थ बनी, जो कि उनको युवाले एक स्टार क्यारियरको प्रतिज्ञा गरे।
नाइजीरिया मा भाषण
जेम्स ओभियर नोभेम्बर 24 मा 1978 मा जन्मिएको थियो। उनको पहिलो व्यावसायिक क्लब "कोवारा" थियो, जसको साथ उहाँले 15 बर्ष को उमेर मा 1994 को गर्मी मा एक सम्झौता हस्ताक्षर गरे। त्यसोभए, धेरैले देख्न सकेन कि सानो मान्छे एक अविश्वसनीय प्रतिभा छ। अर्को वर्षको जाडोमा ओईरिइले आफ्नो एसिन्ट सुरु गरे, अझ प्रसिद्ध नाइजीरिया क्लब "Enyimba", जहाँ उनी लामो समयसम्म रहन सकेनन् - उनको छ महिनामा उनी युरोपबाट क्लबहरूमा रूचि राख्छन् र गर्मीमा 16 वर्षको स्ट्राइकर बेल्जियम "एन्डरलेच" को भाग बने। जेम्स ओभिएरालाई सट्टा फुटबल प्रतिभाशाली हुन्थ्यो, तर यो हुन नमिल्ने थिएन।
Anderlecht को लागि भाषण
स्ट्राइकर जेम्स ओभिएरा के थियो? उहाँबाट फुटबल धेरै टेक्निकल थियो, उनले उत्कृष्ट रूपमा बल पकडेका थिए, एक स्मार्ट झटका थियो, तर यसलाई युरोपमा थाहा थिएन। अनुबंध को तीन वर्ष को लागि "एन्डरलेच" मा, उनले केवल तीस म्याच खेले, जसमा उनले केवल छह गोल गरे। नतिजाको रूपमा, तिनीसँग सम्झौता विस्तारित थिएन, र 19जेम्सको उमेरमा स्विट्जरल्याण्ड गए। उनले स्थानीय क्लब "ग्यासहोप्टर" सँग सम्झौता गरे।
तर स्विट्जरल्याण्डमा फुटबल खेलाडीको क्यारियर डाउनहिल भयो। हो, केवल 1 9सम्म, ओबारारा घाइते हुन थाले र रिकवरी पछि आफूलाई काम गर्ने उचित इच्छा देखाउनुभएको छैन। नतीजाको रूपमा, ग्रासेहोप्टरमा तिनको बस्ने तीन वर्षसम्म उनले मात्र 14 खेल खेलेका थिए र सबै गोलहरू गोल गरेनन्। यो केन्द्रीय स्ट्राइकर को लागि एक भयानक आंकडा हो, र स्विस क्लब उनको साथ अनुबंध को नवीकरण गर्न नहीं चाहता। सौभाग्य देखि, 22 वर्षीया अझै पनि मास्कोको लोकोमोटिभको अन्तिम क्लबमा रूचि राखिएको थियो।
जेम्स ओबिएरा, जसका तस्विरहरू केही वर्षअघि सबै पत्रिकामा थिए र संसारलाई एक नयाँ ताराको प्रतिज्ञा गरे, एक औसत खेलाडीको "लोकोमोटिभ" मा बदलियो, तर उनले कसरी आफूलाई आत्मविश्वास प्राप्त गर्न सकेन। रुसी क्लबमा स्ट्राइकरले दुई र आधा ऋतुहरू बिताए, 62 खेल खेल्दै र 20 गोलहरू स्कोर गर्दै, जो अघिल्लो परिणामको तुलनामा अत्यन्त प्रभावकारी थियो, तर लोकोमोटिभको लागि पर्याप्त राम्रो थिएन।
2003 मा, एक 24 वर्षीय फुटबल खेलाडी स्पेनिश "काडीज" लाई पठाइयो, जहाँ उनले 17 म्याच खेलेका थिए र दुई गोल गरे। भाडा काम गर्न लाग्यो, र Obiora ले आफ्नो मन उठ्यो, तर लामो समय सम्म। र प्रशंसकहरू पछाडि समय थिएन, जस्तै सर्भरमा 2005 ओभरियर फेरि फेरि पट्टि पर्थ्यो, तर फ्रान्सेली "Nyor" को यो समय, जहाँ उनले 12 म्याच खेलेका छन्, दुई पटक धेरै "Cadiz" मा स्कोर गर्दै, तर अझै पनि र धेरै। यो अन्तमा स्पष्ट थियो कि ओभरियरले आफ्नो अन्तिम मौका छोडेका थिए - लोकमोटोवले उनको साथ आफ्नो सम्झौतालाई नवीकरण गर्न अस्वीकार गरे, र जेम्स, नि: शुल्क एजेन्टको रूपमा अस्ट्रियाियन जीएकमा गए।
त्यसोभए मैले कसरी मेरो प्रतिभा जेम्स ओभियरको छुटेको छु। फुटबल खेलाडीको क्यारियर डाउनहिल हुँदै गयो, र उनी युरोपको प्रमुख क्लबहरूले अब माग्न चाहँदैनन्, जस्तै यो हुन सक्छ, यदि उनीहरूको प्राकृतिक आलस्यताका साथै उनीहरूको आघातको लागि प्रबलता पनि थिएन।
26 बर्षीया बालिकाले "चक" को लागि उनको प्रदर्शन राम्रो तरिकाले नलगाउने र अन्ततः पाँच खेलमा खेलेका छन, बिना गोल बिना बनी रहे। उनको साथ अनुबंध समाप्त भयो, तर त्यसपछि धेरै "Nyor" आए, जसले नाइजीरियालाई दोस्रो पटक मौका दिन निर्णय गर्यो। अलास, ओबायरले प्राय: प्रायः खेलाडीको लागि 16 म्याचहरू खेलेका छन्, तर केवल दुई पटक मात्र प्रतिस्पर्धाको ढोकामा हिट गर्न सकेन। एक वर्षपछि उहाँ आफ्नो घर, क्लब "कडोना" जानुभयो, जसको लागि उहाँले मात्र एक सिजन खर्च गर्नुभयो - 23 खेलमा खेल्नुभयो र एक गोल बनाए।
2008 मा, 29 वर्षीयाले आफ्नो अन्तिम प्रयास गरे - उनले फ्रेन्च क्लब "टुउलोन" सँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, तर फेरि असफल भए, उनीहरुले मात्र 11 म्याग्दीमा चोट लागेको र दुई गोल गरे। तीस वर्षीय खेलाडीले आफैंको लागि सजिलो निर्णय गरे - उनले आफ्नो फुटबल क्यारियर यहाँ र अब, अयोग्य प्राप्त गर्न को लागी अरु कोसिस नगरी नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरे।
त्यसैले विश्वको सबैभन्दा प्रतिभाशाली युवा फुटबल खेलाडिहरूमध्ये एक यात्रा समाप्त भयो र बेकार अगाडीको परिणामको रूपमा, पर्याप्त लक्ष्यहरू स्कोर गर्न असमर्थ भएन, कम्तिमा एक वर्ष भन्दा लामो समयसम्म एक क्लबमा रहन।
ओरिरिआको उदय हुँदा, तिनले "लोकोमोटिव" मा प्रदर्शन गर्दा, नाइजीरियाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कोचले युवा फुटबल खेलाडीलाई देखाएको छ, जसले उनको खुट्टामा मैदान खोज्न थाले। ओबियोर एक कार्ट ब्ल्यान जारी गरियो - उनले 2002 विश्व कप को सीधा टिकट प्राप्त गरे। समूहमा नाइजीरियाहरूले आफ्नो पहिलो दुई म्याच गुमाए, त्यसपछि तेस्रो खेलमा, उनीहरूको लागि केही निर्णय गरेनन्, ओबाइराले मौका पाएका थिए र खेतमा खेल्न अंग्रेजी विरुद्ध खेल्यो। म्याच एक गोलाकार ड्रगमा समाप्त भयो र जेम्सले विश्व कपमा स्कोर गर्न सक्दैनन्। उनले राष्ट्रिय टोलीका लागि दुई मित्रता खेलहरू गोल गरे, जसमध्ये एक गोल एक गोल गरे, तर नाइजीरिया राष्ट्रिय राष्ट्रिय टोलीको साथमा उनको अभ्यास माथि थियो।
एन्डरी Solomatin: जीवनी, फुटबल क्यारियर
स्टेफन डे राइट - डच प्रतिभा सुरक्षाको लागि
स्टीव मैकम्यानमैन: जीवनी, तथ्याङ्क, क्यारियर
रूसी स्ट्राइकर पवेल याकोभ्लेव
Mustifi Shkodran - जर्मनी को एक मजबूत मध्य संरक्षक मध्ये एक
Tsvetotip "गर्मी": महिलाहरु को लागि सुझाव स्टाइलिस्ट। के बाल रंग "गर्मी" tsvetotipu फिट?
कसरी प्रणाली विन्डोज7मा पुनर्स्थापित चलाउन?
अदुवा कसरी उपयोगी छ: परम्परागत औषधिको सल्लाह
डैक ध्वनि: परीक्षण पद्धति
पनीर संग बैगुन कसरी खाना पकाउनु
Camelina तेल: लाभ र हानि बोट उत्पादन
ओशो पुस्तकहरू: सर्वश्रेष्ठ सूची। भगवान श्री राजनेश
फ्लू को शट: contraindications। म एक फ्लू शट चाहिन्छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन सूचक - खुद वर्तमान मूल्य।